Sida loo tirtiro koontadaada Aliexpress, talaabo talaabo | Madasha Mobile -ka
Sida loo tirtiro koontadaada Aliexpress, talaabo talaabo
Cristian Garcia | 24/09/2021 09:09 | Internet, Tababarada
Waxyaabo badan ayaa dhici kara oo aad adigu go'aansato tirtir koontadaada Aliexpress, oo ay ka mid tahay in aadan ku faraxsanayn iibsashada ama aad go'aansatay inaadan mar dambe ka iibsan dukaanka internetka. Sababtan awgeed, xitaa haddii ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan dukaamada onlaynka ah ama bogagga shabakadda ecommerce, waxaad sababahaaga si fiican u caddayn kartaa. Wayna ka sii badan tahay, iyada oo aan sidoo kale qiil loo helin, maxaa yeelay waxaad tahay milkiilaha xogtaada. Taasi waa sababta aan kuu bari doonno sida siyaabo kala duwan looga saaro ka -noqoshada mareegaha si xogtaadu aysan ugu sii jirin keydka Aliexpress.
6 kanal ee ugu wanaagsan Telegram -ka oo loo kala qaybiyay mawduucyo
Waxaa laga yaabaa inaad xitaa shaki gasho haddii aad dejiso oo aad u malayso in xogtaadu weli ku jirto keydka Aliexpress, taas oo ah, waxaad rabtaa inaad hubiso in wax walba si joogto ah loo tirtiro. Waxaan hore u filaynay in xitaa haddii aad xisaabtaada ku tirtirto Aliexpress, waa inaad si toos ah uga codsataa shirkadda lafteeda in xogtan gabi ahaanba laga saaro xogteeda rasmiga ah. Waxaan ku qaadaneynaa inaad tirtirto koontada laakiin markaa qaybta gaarka ah ee shirkadda lafteeda waa inaad codsataa. Ha welwelin, sidoo kale waxaa jiri doona tuse gaaban tan tan dhamaadka maqaalka.
1 Sida loo tirtiro koontada Aliexpress?
1.1 Ka tirtir koontada Aliexpress kombiyuutarka
1.2 Ka tirtir koontada Aliexpress taleefanka gacanta
1.3 Si joogto ah u tirtir koontada
Sida loo tirtiro koontada Aliexpress?
Sidaan kuu sheegno, si aad u tirtirto koontadaada Aliexpress, waxaad awoodi doontaa inaad ka sameyso laba meelood, websaydhka rasmiga ah ee ecommerce ama isla taleefanka gacanta. Dabcan, labada gooboodba waa inaad ku samaysaa habab rasmi ah. Laakiin wax waliba waxay leeyihiin faahfaahintiisa waana meesha aan ku sharxi doonno sida loo sameeyo illaa aan ka gaarno heer aan si joogto ah u tirtirno koontada.
Ka tirtir koontada Aliexpress kombiyuutarka
Ha welwelin sababtoo ah tirtiridda koontada ayaa noqon doonta mid aad u fudud. Waxa kaliya oo ay tahay inaad raacdo tallaabooyinka aan hoos ku siinno. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad gasho websaydhka rasmiga ah ee Aliexpress oo aad ku gasho magacaaga isticmaale iyo furahaaga sirta ah. Sida haddii aad doonaysid inaad iibsato caadi iyo hadda. Halkaan ka raac talaabooyinkan:
Geli astaantaada Aliexpress oo la yiraahdo My Aliexpress
Hadda gali dejinta koontadaada oo intaas ka dib tag qeybta wax ka beddel astaanta isticmaalaha.
Hadda meesha aad ka tafatirto xogtaada astaanta guud ahaan waa inaad gujisaa badhanka buluugga ah si aad u damiso koontada, in kasta oo sida caadiga ah ay tahay Ingiriis ahaan "Koontada Dami"
Hadda waxa lagaa doonayaa waa intaas xaqiiji in la damiyo xisaabta ka dibna geli macluumaad kale oo aasaasi ah oo aad garan doontid sida loo buuxiyo, sida sababta aad u rabto inaad u damiso koontadaada. Halkan waxaad sidoo kale gabi ahaanba xiriiri kartaa emaylkaaga si aadan waligaa u helin macluumaad ganacsi oo badan iyo waxyaabo kale oo la xiriira Aliexpress.
Maskaxda ku hay in adoo raacaya dhammaan tillaabooyinkan aad gebi ahaanba lumin doontid koontadaada oo dhan iyo marin -u -helkeeda. Waxaad sidoo kale waayi doontaa dhammaan xiriiradaada, farriimahaaga iyo daabacaadaha aad ku sameysay e -commerce Aliexpress iyo milkiilaha Alibaba labadaba. Codsigaaga oo dhan waxaa lagu baaraandegi doonaa 24ka saac ee soo socda markaa ha quusan haddii aad weli geli karto ama wax kasta.
Ka tirtir koontada Aliexpress taleefanka gacanta
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay inaad ka tirtirto koontadaada Aliexpress taleefankaaga gacanta, waxaad ogaan doontaa in dhammaan tillaabooyinka la raacayo ay aad ugu eg yihiin wixii aan hore u aragnay si looga sameeyo kombiyuutarkaaga gaarka ah. Dabcan, waxaa jira tallaabo yar oo ay tahay inaad ogaato si aad uga suubiso taleefanka maxaa yeelay haddii aad rabto inaad halkaas ka tirtirto waa inaad codsataa nooca desktop -ka. Taasi waa, waa inaad samaysaa habka oo dhan sida haddii aad ka samaynaysay kombuyuutarka laakiin aad ku samaynaysay taleefanka gacanta. Si taas loo sameeyo, waa inaad raacdaa tallaabooyinka soo socda:
Waxaad furi kartaa tabta biraawsarka oo halkaas ka gal Websaytka Aliexpress.
Hadda gal goobaha adigoo riixaya badhanka geeska midig ee sare.
Halkan waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarka aad ku calaamadeyn karto aragtida kombiyuutarka. Waxaa laga yaabaa in si ka duwan loo qoro laakiin mar walba waa la mid noqon doonaa.
Marka boggu culeys yeesho waa inaan taas kuu sheegnaa tallaabada muhiimka ah ayaa mar hore la samayn lahaa.
Hadda raac dhammaan tallaabooyinka aad ku akhriday qoraalka tuducyada kore si aad uga tirtirto koontada Aliexpress PC.
Haddii si kadis ah laguu waydiiyo wakhti kasta haddii aad runtii doonayso inaad ku sii waddo nooca kombiyuutarka taleefankaaga gacanta, mar walba waa inaad ku jawaabtaa haa. Ha u maleynin inaad haysato barnaamijka Aliexpress waxaad awoodi doontaa inaad ka tirtirto koontadaada halkaas sababtoo ah waxaad ka timid Aliexpress marna ma oggola in tan la sameeyo.
Si joogto ah u tirtir koontada
Sidii aan hore u sheegnay, hal shay waa in la tirtiro koontada midna in la tirtiro xogtaada oo la tirtiro si joogto ah. Si taas loo sameeyo waa inay noqotaa laga bilaabo bogga asturnaanta Aliexpress. Hadda waa inaad ka samaysaa PC -gaaga ama biraawsarkaaga gacanta. Xusuusnow haddii aad ku jirto taleefankaaga gacanta waa inaad mar labaad dhaqaajisaa nooca desktop -ka. Waxaan mar walba kugula talineynaa inaad ka sameyso kumbuyuutarkaaga shaqsiyeed, way ka raaxo badan tahay. Si aad u tirtirto koontadaada waa inaad raacdaa tallaabooyinka soo socda:
Gali gudaha qaybta asturnaanta ee Aliexpress oo tan ka dib ku gal akoonkaaga Aliexpress
Hadda waa inaad guji badhanka oranaya tirtir koontadayda ama af Ingiriis «tirtir koontadayda»
Xitaa haddii digniin soo baxdo, iska indho iyo mar labaad riix Maxaad rabtaa inaad tirtirto koontadaada?
Hadda waa inaad fur emailkaaga la xiriira waana inaad soo saartaa koodhka xaqiijinta ee ay ku siiyaan oo ku dheji Aliexpress halka lagu tilmaamay
Hadda iyo tallaabada ugu dambeysa waa inaad aqbashaa wax kasta oo ay hortaada dhigaan, taas oo ah, xaqiiji qalliinka adigoo ku qora "oggolaada" ama xaqiijiya, mabda 'ahaan badiyaa waa Ingiriis. Haddii tallaabadan kadib daaqad kale kuu soo baxdo waa inaad mar kale doorataa "Tirtir koontadayda" oo waxay ahaan lahayd.
Waqtigan xaadirka ah waa inaan kuu sheegnaa inaad mar hore tirtirtay akoonkaaga Aliexpress. Hadda ha ka laaban waayo ma awoodi doontid. Dhab ahaantii, waa inaad dib ugu bilowdaa koonto cusub. Ka fikir inay sii wadi doonaan inay tirtiraan xiriir kasta oo aad iyaga la lahayd. Dhammaan xogtaada waxaa laga tirtiri doonaa 24 -ka saac ee soo socota keydka Alibaba, milkiilaha Aliexpress ecommerce.
Waxaan rajaynaynaa in maqaalku waxtar lahaa iyo in tallaabooyinka la raacayaa ay ahaayeen kuwo aad u fudud. Waxaan kugu arki doonaa maqaalka Madasha Mobaylka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Sida loo tirtiro koontadaada Aliexpress, talaabo talaabo
Sida loo hagaajiyo qaladka darawalka WIA